Iraka: Iza no ho Praiministra manaraka?	Voadika ny 05 Jolay 2010 12:40 GMT
Zarao: Tsy nahita marimaritra iraisana ho amina kandidà tokana hapetraka amin'ny toeran'ny Praiminisitra ireo vondrona roa maro an'isa lany tamin'ny fifidianana, na dia efa natao tamin'ny 7 Martsa aza ny fifidianana ny ho parlemanta irakiana. Nanambara ny Praiministra amin'izao fotoana i Nouri Al Maliki fa nisy ny halatra nandritry ny fotoam-pifidianana. Na izany aza, nanaiky ny valim-pifidianana ihany tamin'ny farany ny vaomiera misahana ny fifidianana ary nanamafy fa tsy marina ny fanambaran’ i Al Maliki.
Mbola manontany tena ao amin'ny lahatsoratra hafa i Iraqi Pundit raha midika izany filazana izany fa hifanaraka amina kandidà tokana ny vondrona maro an'isa irakiana, na mbola hitohy amin'ny fampiraharahana ihany izy ireo mandritry ny roa volana mahery: Milaza ireo mpanao politika fa hanao ny hetsiny mitambatra izy ireo atsy ho atsy. Efa nahaino an'izany isika taloha, fa manantena isika fa hisy dikany izany amin'ity indray maka ity. Milaza i Nouri Al Maliki fa tsy hiala amin'ny sezan'ny maha-praiministra azy izy. Mampalahelo ny mijery azy satria efa nankatoavin'ny Fitsarana an-tampony ny valim-pifidianana tamin'ny 07 martsa, izay manambara fa i Ayad Allawi no kandidà manana toerana maro indrindra ao amin'ny parlemanta.
Afrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaIràka